Faro kama qodna dagaalka Guriceel “Gurmadyo labada dhinac kala gaaray” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Faro kama qodna dagaalka Guriceel “Gurmadyo labada dhinac kala gaaray”
Dagaal xoogan ayaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, kaa oo dabo socdo dagaal maanta ka dhacay magaaladaasi, waana maalintii saddexaad oo dagaalka cid horumar muuqdo ka sameysay aanay jirin.
Ciidamada Dowladda Somaliya iyo kuwa Galmudug oo tan iyo saakay dadaal badan ugu jiray, sidii ay isugu ballaarin lahaayeen xaafadaha waqooyi ee magaalada ayaa waxaa la soo sheegaya in gelinkii dambe ee maanta dib looga soo riixay, iyagoona haatan ku sugan koonfurta magaalada, oo ah goobihii uu xalay gabalka ugu dhacay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in galabta Xoogaga Ahlu Sunna ay gaareen gurmadyo qaab beeleed u abaabulan, kuwaa oo isaga kala yimid qaybo ka mida deegaanada Gobolka Galgaduud.
Dhinaca kale Dowladda Federaalka ayaa galabta boqolaal askari ku daabushay Magaalada Dhuusamareeb, kuwaa oo caawa ku sii jeeda dhinaca Magaalada Guriceel. Ciidamadan waxay bedel u yihiin Ciidamadii Dowladda ee dhaawacyadooda la geeyay Caasimadda Muqdisho.
Sidoo kale diyaarado siday saanad hub oo madaafiicda goobta u badan ayaa galabta ka degay Garoonka Diyaaradaha Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb, waxaana muuqata in dagaalka Guriceel aanu faro ka qodnayn.
Taliyaha Ciidanka Nabad Sugidda Guriceel, Cabdullaahi Cabdi Raage oo dhawaan dib ula midoobay Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe ayaa maanta sheegay in dagaalka Guriceel uu yahay mid caqiiddo ku saleysan, isla-markaana aan ebid lagu jebin doonin Ahlu Sunna, sida uu yiri.
“Waxaan ka xumahay dhallinyarada maalin walba lagu soo daabulayo Guriceel ee meydadkooda iyo dhaawacyadooda laga jiidayo. Waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo, Sheekh Maxamed Shaakir horey ayuu u sheegay inuu nabadda qaatay, nabadna uu ku baaqayo.” Ayuu yiri Cabdullaahi Cabdi Raage oo la hadlay Radio Shabelle.
Wax badan laga oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay Magaalada Guriceel, waxaase jira warar sheegaya in illaa toddobo qof oo labada dhinac ah ay ku dhinteen, dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay.
Guriceel oo ganacsiga caan ku ahayd waxay hadda u muuqataa furin dagaal, dadkeediina waxay ku dar xumeysan yihiin bannaanada magaalada, labada dhinacba uma muuqdaan kuwo maatidaasi u diir naxaya inay yihiin.
Previous articleMidowga Musharaxiinta oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Guriceel
Next articleQaylo dhaanta ka soo yeeraysa duleedka Guriceel oo korodhay